Nkịta Ezinụlọ na-echebe ụmụaka megide ihe nfụkasị ahụ, ụkwara ume ọkụ: Gut Microbiome kpụgharịrị na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa iku ume - Ibi ndụ ahụike 2022
Nkịta Ezinụlọ na-echebe ụmụaka megide ihe nfụkasị ahụ, ụkwara ume ọkụ: Gut Microbiome kpụgharịrị na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa iku ume
Ezigbo enyi mmadụ nwere ike ịbụ ụzọ kacha mma iji gbanarị ụkwara ume ọkụ na allergies. Nke ahụ bụ nkwubi okwu ọhụrụ sitere na Tufts University School of Medicine, ebe ndị nchọpụta ekpebiwo na nkịta anụ ụlọ nke a na-ahapụ n'ime ụlọ nwere ike ibelata ihe ize ndụ nke nwatakịrị nwere ike ịmepụta ụfọdụ nsogbu iku ume. Nchọpụta ahụ na-egosi ndụmọdụ ahụike ọha ọhụrụ maka ndị nọ n'ihe ize ndụ.
Ndị na-eme nchọpụta amatala ogologo oge maka njikọ ọnụ ọgụgụ dị n'etiti nkịta na mbelata ihe ize ndụ nke allergies. Otú ọ dị, akwụkwọ nyocha ole na ole nwara ịkọwa ihe kpatara e ji nweta mmetụta nchebe a. Ọmụmụ ihe dị ugbu a, nke e bipụtara na akwụkwọ akụkọ Proceedings of the National Academy of Sciences, na-enye otu n'ime nkọwa mbụ nke nkịta 'na-egbochi ihe nfụkasị ahụ.
Dị ka onye na-eme nchọpụta bụ Susan Lynch si kwuo, ndị otu ahụ "gbara nyocha ma ọ bụrụ na ekpughere ya na microbiome dị iche iche nke na-ejikọta ya na n'ime ụlọ / n'èzí na-eme ka mmetụta nchebe site na ịmegharị microbiome gut, na site na mgbatị, nzaghachi mgbochi onye ọbịa." N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Lynch na ndị ọrụ ibe ya chọrọ ịma ma ị na-ekekọrịta gburugburu ebe obibi na nkịta na-ebelata mmetụta gị na allergies na nsogbu iku ume site na ịmegharị nje bacteria gị.
Iji nyochaa, ndị otu ahụ haziri nnwale na ụmụ oke. Uzuzu sitere n'ụlọ ndị nkịta kpuchiri ọkara nke isiokwu ahụ, ma ndị ọzọ anọghị. Ekpughere isiokwu niile na protein na ihe nfụkasị allergens.
Ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na e jiri ya tụnyere ndị na-ahụ maka njikwa, ụmụ oke ndị ahụ na-ekpuchi uzuzu nwere nzaghachi mkpali dị ala nke metụtara ụkwara ume ọkụ na ngụgụ. Ihe ndị a echedoro gosikwara microbiome megharịrị nke nwere nje bacteria “dị mma”. Otu ụdị microbe pụtara pụtara: Lactobacillus johnsonii. Mgbe nke a dịpụrụ adịpụ ma nye ya ụmụ oke ndị ọzọ nri ozugbo, enwetara mmetụta nchebe yiri ya.
Ọmụmụ ihe dị ugbu a na-egosipụta nhụpụta na-akpali akpali nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọhụrụ na nchọpụta nchọpụta metụtara nkịta. Enwere ike ịchọta ọrụ ọzọ na Working Dog Center nke Mahadum Pennsylvania's School of Veterinary Medicine, ebe nkịta McBaine, Ohlin, na Tsunami na-enweta ọzụzụ nchọpụta pụrụ iche ugbu a nke ga-enye ha ohere ịpụpụ ọrịa cancer ovarian.
Ndị otu ahụ nwere obi ike na nchoputa ọhụrụ a ga-enye aka na-aga n'ihu na-achọ ndị na-ahụ maka ihe ndị na-eme ihe na-egbochi ọrịa ahụ na nhọrọ ọgwụgwọ. N'agbanyeghị na nsonaazụ ya bụ naanị oke oke, ule mmadụ amalitelarị. "Nsonaazụ nke ọmụmụ anyị na-egosi na nke a nwere ike ịbụ otu usoro nke gburugburu ebe obibi na-emetụta nzaghachi mgbochi ọrịa na mmalite ndụ, na ọ bụ ihe anyị na-enyocha ugbu a site n'iji ihe nlele mmadụ na-enyocha nnukwu ọmụmụ ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ nke NIAID kwadoro." " Lynch kwuru na nkwupụta mgbasa ozi. "Gut microbiome manipulation na-anọchite anya usoro ọgwụgwọ ọhụrụ na-ekwe nkwa iji chebe ndị mmadụ n'otu n'otu pụọ na ọrịa akpa ume na ọrịa nrịanrịa nke ikuku."